Binance - Mụta ahia 2
£ 1 kacha nta ego
Binance amụbaala nke ọma ebe ọ bụ na e hiwere ya na 2017 ma bụrụkwa otu n'ime, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nnukwu mgbanwe mgbanwe na ahịa.
kacha nta ego 37
trading Platform Web Trading Platform, Mobile Trading App
Onu ogugu 350
Ofdị Akụ cryptocurrency
O doro anya na mgbanwe nke Binance bụ onye na-eme eze na etiti 2018 cryptocurrency. Binance bụ mgbanwe kasịnụ nke ụwa, site na olu 24 awa, yana oge obula mkpụrụ ego na-agbakwunye na ikpo okwu, ị nwere ike ịba uru ya ga-akarị okpukpu abụọ. Binance toro ngwa ngwa na 2017, mana adaghị mba ọbụlagodi mgbe ọchịchọ dị ukwuu. Ọ na-anọgide na-adị ọnụ ala, nke a pụrụ ịdabere na ya, yana onye ọrụ enyi, yana obere ọhụụ ọhụụ ka akwụmụgwọ ya. Binance abụghị mgbanwe zuru oke maka nzube ọ bụla, mana ọ karịrị atụmanya maka ọtụtụ.
Saịtị très sophistiqué
Ntughari a na - ewepu VIP
Ezigbo ahịa ahịa
$ 160 Min ego
O siri ike ikwenye na e hiwere Binance ihe na-erughị otu afọ tupu ederede a: July 2017. Binance guzobere ya site na otu ndị nwere ọtụtụ ahụmịhe na azụmaahịa dị elu na ahịa dị iche iche, yana akụ dijitalụ na oghere blockcheni. Companylọ ọrụ ahụ mepụtara ọhụrụ site na ịhapụ mkpụrụ ego nke aka ya (Binance Coin - BNB) yana ikpo okwu, nke ojiji nke onye nwe ya na-azụ ahịa ego.
Ihe nlereanya ahụ bụ ihe kụrụ, BNB azawokwa na uru. Binance gbakwunyere ngwa ahia ohuru nke uzo ahia nke ndi ozo, tinyere ndi obodo ya na uzo obula. Taa, ike ha akwụsịbeghị, Binance nwekwara ike ịnọgide na-abụ mgbanwe kachasị emetụta n'ala ahụ ruo oge ụfọdụ - ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ si na Hong Kong kwaga Malta ịchọta ụkpụrụ omume enyi.
Binance Uru na ọghọm
Ọnụahịa dị egwu
Nnukwu ego ahia ahia (BNB)
Tọn mkpụrụ ego ahia
Nnukwu mmiri mmiri
Nnukwu iru mba
Ọrụ dị mma
Fzụ ahịa ahia nwere ike ịka mma
Enweghị ngwa mkpanaaka raara onwe ya nye
Ihe mkpuchi ego nke Binance kwadoro na-akarị oke aha. Ndị kasị ewu ewu dị ka nke 6/12/18 bụ:
Bitcoin, EOS, Ethereum, Omuma, Ọnụ ego Binance, Bitcoin Cash, Skycoin, Quarkchain, Ontology, Tron, Loom Network, Aeron, Cardano, Litecoin, Stellar Lumens, IoTex, Ripple, CyberMiles, IOTA, ICON, Nano, na NEO
Enwere ọtụtụ mkpụrụ ego ndị ọzọ, ha niile nwere opekata mpe ọtụtụ puku dollar na azụmaahịa ahịa kwa ụbọchị. Binance na-enye ndị ọrụ ohere ịme ntuli aka na mkpụrụ ego ọhụrụ ka ị gbakwunye na ndepụta ahụ, ma na-emekọ azụmahịa na ọrụ ndị ọzọ iji tinye mkpụrụ ego ha. Dị ka onye isi oche Changpeng Zhao si kwuo, ihe karịrị ụlọ ọrụ ọhụrụ 1,000 na-anwa ime ka mkpụrụ ego ha depụta na Binance. O doro anya ole n'ime ha ga-agbakwunye otu ụbọchị.
Nkuzi: Otu esi edebanye aha na ahia na Binance
Banye na Binance bụ ikuku. Naanị gaa na saịtị ahụ, nye ha email gị na paswọọdụ ọhụrụ, ma chere ka email nyocha ahụ rute na nkeji ma ọ bụ karịa.
Pịa nkwenye njikọ na email ị nwetara. Gaa na saịtị ahụ ma melite Nyocha 2 Factor, nke ga-enye gị nchekwa karịa nchekwa naanị paswọọdụ. Ozugbo n'ime saịtị ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịbawanye oke ahịa gị site na ịnye Binance NJ na ihe akaebe nke ozi adreesị ha rịọrọ, iji mezuo iwu KYC (mara onye ahịa gị) site na mba dị iche iche. A ga-agwa gị ka ị nye gị foto nke ihu gị yana akwụkwọ abụọ a. Nke a gosipụtara na ị bụ onye ị na-ekwu na ị bụ, nke na-enyere Binance aka igbochi aghụghọ na ịchụ ego na-anọ na ikpo okwu ha.
Nkwụnye ego & ndọrọ ego:
A na-etinye ego na naanị cryptocurrencies. Ga-enwe obere akpa raara onwe ya nye maka cryptocurrency ọ bụla nke ikpo okwu na-akwado. A na-eme ego site na itinye adreesị obere akpa Binance gị n'ime adreesị obere akpa gị na izipu ego ahụ n'ụzọ ahụ. A na-ewepu ego na ntụgharị, site na itinye adreesị nke obere akpa gị nke atọ n'ime akara a rịọrọ na mpempe akwụkwọ Binance Send. Enwere vidio Youtube na-egosi usoro a ma ọ bụrụ na ị nwee mgbagwoju anya. Ezipụla ego ọ gwụla ma ijiri n’aka na ị na-eme ya. Nwere ike izipu obere obere ego na mbụ ị ga-ahụrịrị na ị ga-etinye ya tupu izipu usoro gị zuru oke.
Esi zụta / ahia:
Iji ma obu mbido ma obu Advanced nyiwe, ị ga - enwe ike ihu Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, ma obu Tether dika ego ahia gi. N'ezie, ị ga-etinye otu n'ime ego ndị a tupu ị nwee ike ahia ya. Ozugbo ịhọrọla ego gị, ị ga-ahụ ụzọ azụmaahịa niile dị na ego ahụ. Họrọ nke ịchọrọ, ma mee usoro ịgba (ị họrọ ọnụahịa ahụ), usoro ahịa (ọnụahịa jupụtara na gị dabere na ihe ọ bụla dị ugbu a), ma ọ bụ usoro nkwụsịtụ (ị họrọ ọnụahịa nke ga-ebute ire ma ọ bụ zụta dabere na arụmọrụ ọnụahịa akọwapụtara). Ozugbo ị kwụrụ ụgwọ gị, mkpụrụ ego ọhụrụ gị kwesịrị ịdị na obere akpa Binance gị na nkeji ma ọ bụ sekọnd.
Etu esi echekwa Cryptocurrency ohuru gi:
Echekwala ogologo oge cryptocurrency na mgbanwe nke ị ji zụta ya. Mbanye anataghị ikike na-eme mgbanwe mgbanwe oge niile, ndị na-echekwa ego ha ebe ahụ na-efunahụ ha na-enweghị olileanya mgbake. Ọ bụ ezie na nke a emetụbeghị Binance, nke a apụtaghị na ọ gaghị eme eme. Iji kpochapụ ihe ize ndụ ahụ, kpalie mkpụrụ ego gị na obere akpa ngwanrọ na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka, ma ọ bụ n'ime obere akpa ngwaike dịka Ledger Nano S. Maka ilele ụyọkọ nhọrọ akpa ego dị elu, lelee kacha mma Bitcoin wallets peeji nke.
Binance awade abụọ trading ikpo okwu ihu, "Basic" na "Advanced". Isi ihe dị iche bụ ọdịdị, yana ọhụụ ndị nwere ọkaibe karịa na nsụgharị Advanced. Ma iteration nke Binance trading n'elu ikpo okwu bụ n'ezie kensinammuo maka ọhụrụ ọrụ, ma ha na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè. Ndị ọrụ nwere ike ịme Limdị mmachi, Ahịa, na Kwụsị-ordergba usoro na ụdị abụọ nke ikpo okwu. Ikwu eziokwu, anyị echeghị na otu ụdị nyiwe a siri ike iji karịa nke ọzọ, mana onye ọrụ nwere nhọrọ ọ bụla n'otu oge.
Asụsụ: English, Spanish, French, German, Turkish, Polish, Portuguese, Italian, Dutch, Chinese, Arabic
nkwụnye ego Ụzọ: Cryptocurrencies
Iwu & Nchedo
Binance bu ụzọ chịkwaa ụlọ ọrụ ego na Hong Kong, emetụta 2017 / mmachi na China "na mgbochi" na mgbanwe ụlọ. Hong Kong abụghị n'ezie, 100% n'ime ọkwa gọọmentị China ka ukwuu, mana ọdịnihu Binance edoghị anya. Ka mba Binance gafere Ọwụwa Anyanwụ na Ọdịda Anyanwụ, nsogbu iwu nchịkwa sitere n'aka ndị Japan na ndị America, yana ịga n'ihu na-enweghị mgbagha azụ n'ụlọ, kpaliri Binance ịkwaga Malta, "Agwaetiti Blockchain".
N'ebe a, usoro iwu na-egosi na ọ bụ ezigbo enyi na Binance, ụlọ ọrụ ndị dị ka ndị a na-enwe mmekọrịta mmekọrịta na ndị na-achịkwa, na-esetịpụ ntọala nke na-enye ohere maka ihe ọhụụ, ebe ha na-etinye nsogbu nwere ike na nwa osisi. A ghabeghị ịhụ mgbanwe nke usoro iwu ọhụrụ a.
Banyere nchekwa onye ọrụ, a na-eche Binance ka ọ bụrụ ezigbo nchekwa maka mgbanwe, ma ọ kabeghị ọgụ dị egwu ma ọ bụ mfu ego onye ọrụ. N'ezie, ọ dịghị mgbanwe bụ mgbe 100% mma, ma n'ihi na a ụwa na-eduga ikpo okwu na ọtụtụ ijeri mmiri mmiri na-echebe n'ime, Binance rụrụ admivable.
Ancegwọ Binance & Limits
Nhazi ego nke Binance bu ihe kachasi nma banyere ikpo okwu. A na-ebo ndị ahịa niile ọrụ 0.10%. Mgbe ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ na Binance's BNB, a na-egbutu ego ahụ na ọkara: 0.05% maka azụmaahịa niile. Nke a bụ ego kachasị ọnụ ahịa ị ga-achọta, belụsọ maka mgbanwe ndị na-enye azụmaahịa efu.
Nkwụnye ego nke ego niile bụ n'efu. A na-ebo ndị na-eweghachi ego na ọnụego dị iche iche dabere na mkpụrụ ego ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ Binance si ndọrọ ego ụgwọ ebe a.
Ancezọ ịkwụ ụgwọ Binance
Binance na-enye ndị ọrụ ohere ịkwụ ụgwọ maka altcoyins iji Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, na Tether. Onweghi ahia ozo di n'etiti altcoyinin. Binance anaghị anabata ịkwụ ụgwọ fiat, yana o doro anya na ọ nweghị atụmatụ ime ya n'oge na-adịghị anya. Usoro nchịkwa ga-esi ike, na Binance na-abanyezi n'ụlọ obibi ọhụrụ ha na Malta. Site na ọrụ ndị ọrụ # 1 n'ahịa, Binance yiri ka ọ na-eme nke ọma na-enweghị fiat.
Binance Nkwado Ndị Ahịa
Dị ka ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ, Binance na-anabata arịrịọ ndị ahịa na-eji email. Tupu iwere arịrịọ gị, Binance gosipụtara gị ndepụta nke ajụjụ nkịtị na azịza ha, na-enwe olileanya na ị ga-achọpụta otu esi edozi nsogbu nke gị. Ọ bụrụ na ịkwụsị ịkwụsị iziga arịrịọ gị n'agbanyeghị, ọrụ ndị ahịa Binance bụ (na ahụmịhe anyị) na-anabata ma na-enye aka.
Binance si Unique Atụmatụ
Onweghi ihe obula nke Binance bu nke puru iche (ozo), mana mgbanwe a guzo nani ya dika nchikota nke otutu njiri mara siri ike, na ihe ohuru nke putara ebe edeputara nke na ha adighizi adi ihe ohuru.
Akụkụ kachasị mma nke Binance, maka nkezi ojiji, bụ Binance Coin BNB. Mkpụrụ ego a alọghachitere ihe karịrị 1000% kemgbe ICO. O nwere uru nke aka ya n'ahịa sara mbara ma ndi oru ego na ndi oru Binance na-ere ya. E depụtaghachiwo BNB site na mgbanwe ndị ọzọ dị ka KuCoin, mana ọ nweghị mgbanwe ọzọ hụrụ ka cryptocurrency ji ha nke ọma ka ọ bụrụ nke ụwa niile na-eji.
Akụkụ ọzọ nke ahụmahụ Binance nke enwere ike ịkpọ ihe pụrụ iche bụ nnukwu nhọrọ nke ọrụ dị oke mma dị maka ahia na Binance. Ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ nwere oke (tọn na tọn mkpuchi), mana ole na ole dabara ya na mma (enweghị ụyọkọ mkpụrụ ego nwụrụ anwụ na-enweghị ụda kwa ụbọchị na-ekpuchi ikpo okwu) dịka Binance na-eme. Nke a na-enye ndị ọrụ ohere ọbụlagodi obere ego ka ha nwee usoro azụmaahịa a pụrụ ịtụkwasị obi. More Mgbanwe ego Cryptocurrency.
Kedu ka Binance jiri tụnyere ndị na-ere ahịa na mgbanwe ndị ọzọ
Binance na eToro bụ ihe abụọ dị iche iche, yana ntọala dị iche iche nke ndị ahịa (belụsọ ụfọdụ okporo ụzọ gafere nke na-eji nyiwe abụọ maka ike ha). Binance na-ere cryptocurrencies site na iji usoro anyị tụlerela. eToro anaghị ere cryptocurrencies ma ọlị. Kama, ọ na - ahapụ ndị ọrụ itinye ego na crypto nwere nnukwu ihe mgbochi maka ntinye.
See hụrụ, site na inwe ọdịnala nke akụ dijitalụ, ndị ọrụ ga-ebufe ma chekwaa ego ha naanị ha, na-eji obere akpa dijitalụ nke ndị ọzọ mepụtara, yana site na iji igodo gbagwojuru anya na sistemụ adreesị nke (ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ kposara ha) ga-eweta ọnwụ nke ego. eToro anaghị eji sistemụ ndị a. Kama ire crypto, ha na-ere CFDs.
A CFD bụ nkwekọrịta maka ọdịiche. Onye ọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ ahịa maka otu n'ime cryptocurrencies 10 (ọrụ niile siri ike dịka NEO, EOS, Bitcoin, na Stellar Lumens). Kama ịnyefe ego a na obere akpa, a na-etinye ego onye ọrụ n'ime nkwekọrịta na-anọchite anya ego nke crypto. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịkagbu nkwekọrịta ahụ n'oge ọ bụla, yana nsonaazụ dị iche maka oge.
Ọ bụrụ na ọnụahịa nke njide ahụ dị elu mgbe a kagburu nkwekọrịta ahụ, onye ọrụ na-eme ka nguzozi ahụ dị ka uru, yana nguzozi nke nkwekọrịta nke na-emeghe na njedebe nke akaụntụ ahụ. Ọ bụrụ na ọnụahịa dị ala mgbe a kwụsịrị akaụntụ ahụ, a na-ewepụ ihe dị iche na nguzo a na - emegheghị ugbu a.
N'ụzọ bụ isi, nke a na-enye ndị ọrụ ohere itinye ego na mkpuchi na enweghị isi ọwụwa nke inwe. Ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta cryptocurrency ka ị nwee ike iji ya - ọ bụghị naanị itinye ego - eToro abụghị nhọrọ kachasị mma maka gị. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọ nkọ na uru, eToro ga-enye gị mfe ọfụma, ma e jiri ya tụnyere Binance. Binance, n'aka nke ọzọ, na-enye gị ọtụtụ nhọrọ azụmaahịa, na ọtụtụ ọtụtụ mkpụrụ ego itinye ego na ya. Kedu ikpo okwu ị họọrọ ga-adabere kpamkpam na mkpa gị na mmasị gị. Mgbanwe Cryptocurrency ọzọ.
Mmechi: Binance Safe?
Na njedebe nke ụbọchị, anyị ga-ekweta na anyị nwere mmasị na Binance ntakịrị. Ọ bụ usoro ngosipụta zuru oke nke na-enye ndị ọrụ ohere ka ha nwekwuo cryptocurrencies (ha niile nwere nnukwu ahịa ahịa) karịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa ọ bụla dị mkpa. Ebe nrụọrụ ahụ na-abịa na njedebe ole na ole: ọ dị oke ọnụ, na-enye ndị ọrụ ohere itinye ego na BNB, na-akwado ọtụtụ mkpụrụ ego, ma dị n'akụkụ ụwa niile.
Mana Binance ọ dị mma? ọ dịghị mgbanwe cryptocurrency bụ n'ezie mma. Nchedo abụghị MO kachasị ha, n'agbanyeghị na ha ga-enwerịrị nchebe ka ha nwere ike. Mgbanwe na-emeghe onwe ha nye ọtụtụ nde ndị ahịa, nke na-emepụta nsogbu. Enweghị ụzọ ụlọ ọrụ buru ibu, na-ejide ego a, ka ha ghara inwe nnukwu ebumnuche na azụ ya.
Ka o sina dị, Binance na-enye nchebe dị mma ma ọ hụbeghị nnukwu ego nke ego hacking. Nke a apụtaghị na mwakpo dị otú ahụ agaghị eme, mana Binance nwere otu egwuregwu dị egwu ewepụtara maka ihe ịga nke ọma na nke a. Anyị anaghị atụ anya ka ihe gbanwee n'oge na-adịghị anya, yabụ anyị nwere ike ịkwado Binance na-enweghị ndoputa. Jiri ikpo okwu dika echere, ị ga-enwe ike iji obi ike na-azụ ahịa. Jisie na ahia gi nile!
Bekee, Spanish, French, German, Turkish, Polish, Portuguese, Italian, Dutch,